छ महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र खर्च - Aarthiknews
काठमाडौं । चाँगुनारायण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को छ महिनामा कूल बजेटको ३१ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । आव २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामा शुरु गर्दै नगरपालिकाको आठौँ नगरसभामा सो जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा उपप्रमुख बिना बास्तोलाले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा कूल रु. एक अर्ब ४८ करोड २७ लाख तीन हजार ६०० विनियोजन गरे पनि रु. ४६ करोड ६० लाख ४६ हजार ५०० खर्च भएको उल्लेख गरे । यसमा पूजीँगततर्फ रु. ८१ करोड २५ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म रु. २४ करोड ४६ लाख ७५ हजार ६२४ खर्च भएको छ ।
उहाँले कूल बजेटको चालुतर्फ रु. ६७ करोड एक लाख १३ हजार ६०० बजेट विनियोजन गरेकामा रु. २२ करोड १३ लाख ७० हजार ८१७ अर्थात् ३३ दशमलव तीन प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । नगरपालिकाले चालु आवमा रु. २८ करोड ७१ लाख ६० हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएकामा रु सात करोड २६ लाख ७६ हजार ८४४ अर्थात् २५ दशमलव ३० प्रतिशतमात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ ।
नगरसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार सहकारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, पूर्ण सरसफाइ ताथ बास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको उपप्रमुख बाँस्तोलाले जानकारी दिएका छन् ।